Kuwa ugu horreeya ee Moto P30 ayaa halkan jooga Androidsis
Maalmo ka hor waxaa shaaca laga qaaday in Motorola ay soo bandhigeyso telefoonkeeda cusub ee kala duwan bisha Ogosto 15. Waxaa jira wadar ahaan saddex nooc, taas oo ka kooban Moto P30. Weligaa kamaad maqal taleefannadan ka hor, markaa waxaa jira xiiso iyo xiiso badan oo ku hareeraysan. Hal maalin ka dib soo bandhigideeda, waxaan horeyba u helnay jawaabihii ugu horreeyay ee moodooyinka shirkadda.
Waxay ku saabsan tahay Moto P30, oo aan horeyba u heyney. Iyaga oo mahadsan ayaan helnay fikrad aad u cad oo ah waxa aan ka filan karno qaabkan xagga naqshadeynta. Waxayna umuuqataa in Motorola sidoo kale ay udhacday soo jiidashada darajada.
Maaddaama taleefankani leeyahay shaashaddiisa shaashaddeeda, taas oo soo jiidanaysa dareen badan. Bilahaan, isbeddelku wuxuu ahaa in la isticmaalo qaddarin yar, laakiin Motorola waxay u socotaa jiho ka soo horjeedda. Sababtoo ah shirkaddu waxay u heellan tahay soo-saar ballaadhan, kaas oo xukuma shaashadda qalabka.
Marka xaqiiqdii waxaa jira macaamiil badan oo aan gebi ahaanba ku faraxsanayn naqshadda Moto P30. Waxaa la filayaa inay jiraan laba dareemayaal xagga hore, iyo xagga dambe ee taleefanka waxaan heleynaa laba kamarad, oo loo dhigay si qumman iyo dareeraha faraha.
Inta soo hartay, ma jiraan waxyaabo badan oo kadis ah ama dhinacyo kale oo laga faalloon karo. Waa qormooyinka soo saara dareenka ugu badan ee Moto P30. Waad arki kartaa ama ogaan kartaa in qalabku yeelan doono shaashad ballaaran, sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay waxay noqoneysaa 6,2 inji. Iyo kamaradaha gadaal waxay noqon doonaan 16 + 5 MP.
Waxay u badan tahay, Moto P30 inuu yeelan doono Android Oreo oo ah nidaamkeeda hawlgalka. Laakiin waxaan xallin karnaa shaki berri, maalinta lagu soo bandhigayo taleefannadan kala duwan. Waxaan ku xasuusinaynaa in moodeelkan ka sokow, P30 Note iyo P30 Play ay imaan doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Kala shaandheeyay tiirarka ugu horreeya ee Moto P30
Mobilka Samsung ee isku laaban ayaa imaan doona ka hor intii aan la filayn
Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A waxay yimaadeen Spain